ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ (၂) – Good Health Journal
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ (၂)
ထမင်းအသက် ၇ ရက် ရေအသက် တစ်မနက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ရေဓာတ် က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်ကိုအရေး ကြီးပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တတ်လဲ။ ရေဓာတ် ပြည့်ဝနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရ မလဲ စတာတွေကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါ တယ်နော်။
၁။ ရေသောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေနိုင်သလား။
၂။ ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ဖို့ဆိုရင် ဆိုဒီယမ် ပါတဲ့ အစားအစာနဲ့ အရည်တွေရှောင် ရမယ်။
၃။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ရေအများ ကြီးမသောက်နိုင်ဘူး။
၄။ ရေက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ
(က) အညစ်အကြေးတွေ စွန့်ပစ်ပေး တယ်
(ခ) အာဟာရဓာတ်တွေ ရွေ့လျားစေ တယ်
(ဂ) အဆစ်တွေကို ချောမွေ့စေတယ်
၅။ အောက်ပါတို့အနက် ဘယ်အချက်က ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့ လက္ခဏာရပ် ပါလဲ။
၆။ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေလောက် ရိုးရိုးရေ က ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါလား။
၇။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းက ရေလဲ။
(က) ၁၅ ကနေ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း
(ခ) ၃၅ ကနေ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း
(ဂ) ၅၅ ကနေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း
(ဃ) ၇၅ ကနေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း
ကဲ . . . အဖြေလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် . . .
၁။ (က) ကျစေတယ်
ရေက ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ရေသောက်ခြင်းအား ဖြင့် ဗိုက်ဝသွားတဲ့အခါ အစားကိုသိပ်မစား မိတော့တာကြောင့်ပါ။ အစာစားတာ လျော့နည်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ကယ်လိုရီ အ၀င်လည်းနည်းသွားလို့ ၀ိတ်ကျတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုဒီယမ်ဆိုတာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် နေစဉ်နဲ့ လုပ်အပြီး ရေဓာတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အား ဖြည့်အချိုရည်တွေမှာ ဆိုဒီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒီယမ် ဓာတ်က အားကစားလုပ်နေစဉ်မှာ ဆုံးရှုံး သွားလေ့ရှိတဲ့ သတ္တုဓာတ်တစ်ခုပါ။ ဆိုဒီ ယမ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာနဲ့ အားဖြည့် အချိုရည်တွေက ရေဆာစေသလို ရေ ဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းထားပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို ဆား များလွန်းရင်လည်း သွေးပေါင်တက်စေပြီး တချို့လူတွေမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးအ ခြေအနေကို ဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ (ခ) မှား
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ရေအ များကြီးသောက်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေ မှာ ကျောက်ကပ်က ပုံမှန်ဆိုရင် တစ်နာ ရီကိုရေ မီလီလီတာပေါင်း ၂၀ ကနေ ၁၀၀၀ အထိကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ၀င်ရောက်တဲ့ ရေအရမ်းများလွန်းရင် လည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ရေများလွန်း တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ ကိုယ် အလေးချိန်များတာ၊ ဖောရောင်တာ၊ ပျို့ တာ၊ အန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ရေအဆိပ်သင့်တဲ့ ပြဿနာတွေကနေ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကိုပါ လျော့နည်းစေပြီး ခေါင်းကိုက်တာ၊ လေသင်တုန်းဖြတ်တာ၊ တက်တာနဲ့ သတိမေ့မြောတာတို့ကိုပါ ဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ (ဃ) အပေါ်ကအချက်အားလုံး
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဆဲလ်တိုင်း၊ တစ် သျှူးတိုင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တိုင်းမှာ ရေဓာတ်ရှိနေပါတယ်။ အာဟာရ ဓာတ်တွေ ရွေ့လျားသွားအောင်၊ အညစ် အကြေးတွေ စွန့်ပစ်ဖယ်ရှားအောင်၊ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်တွေ ပုံမှန်ဖြစ်အောင်၊ အဆစ်တွေချောမွေ့အောင်၊ အရေပြားစို ပြည်အောင်နဲ့ အခြားအချက်ပေါင်းများ စွာကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
၅။ (က) ရေဆာတာ
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့အခါ ပထမ ဆုံးသတိပေးတဲ့ လက္ခဏာရပ်တစ်ခုက တော့ ရေဆာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရေဆာတာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ အလေးမထားပါနဲ့။ တခြား လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ နွမ်းလျတာ၊ အရေပြားနီမြန်းတာ၊ အသက်ရှူမြန်တာ၊ နှလုံးခုန်မြန်တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ခက်ခဲတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ပိုင်းလက္ခဏာတွေကတော့ အားနည်း တာ၊ ခေါင်းမူးတာနဲ့ အသက်ရှူခက်တာ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နေပြီလို့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်သတိပြုမိပါက အေးမြတဲ့နေ ရာပြောင်းရွှေ့ကာ ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့် ပေးလိုက်ပါ။ ရေကိုဖြည်းဖြည်းသောက် ပါ။ ရေမြန်မြန်သောက်ပါကလည်း ဆီး သွားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေလို့ ရေဓာတ် ဖြည့်တင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆။ (က) ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်
ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ဆို ရေတစ်မျိုးတည်းနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို အချိန် ကြာကြာပြုလုပ်မှသာ ရေတစ်မျိုးတည်း မလုံလောက်မှာပါ။ အားဖြည့်အချိုရည်က ကြတော့ အရသာရှိပြီး အမောပါပြေစေ တာကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရည်နဲ့ ဓာတ် တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှာပါ။ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ လေ့ကျင့် ခန်းဆင်းတဲ့အခါ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ တစ် ပေါင်တိုင်း တစ်ပေါင်တိုင်း ရေဒါမှမဟုတ် တခြားအရည်ကို ၁၆ ကနေ ၂၄ အောင်စ အကြားသောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၇။ (ဂ) ၅၅ ကနေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း
လူခန္ဓာကိုယ်အများစုက ရေနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတာပါ။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ က အရည်တွေပါ။ ရေဓာတ်ဘယ်လောက် ပြည့်ဝနေလဲဆိုတာပေါ်မှာလည်း မူတည် နေပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးရဲ့ ၇၃ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ ကြွက်သားတွေရဲ့ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ အရေပြားရဲ့ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အရိုးရဲ့ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ရေဓာတ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Categories:	Medical Knowledge, Question and Answer	/ No Responses / by Good Health Journal October 11, 2018
“အင်ပြင်ထခြင်း – ဒေါက်တာအေးမင်းထူး”
ခါးတစ်ဝိုက်က အဆီတွေ ဘာကြောင့်ချလို့ မရတာလဲ